Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ (434-07-1) hplc ma98% | AASraw ntụ ntụ
Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Testosterone ntụ ntụ / Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ
2.75 si 5 dabere na 4 ahịa Fim
SKU: 434-07-1. Categories: Testosterone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Oxymetholone (Anadrol) ntụ (434-07-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ achọtara ya kachasị eme ihe n'etiti ndị na-eme egwuregwu na ndị na-ewu ụlọ maka ọtụtụ mmetụta ọ na-enye na-akpali ihe mgbakwunye testosterone. Na-echekwa arọ ahụ, a na-eche na anadrol ntụ ntụ dị ka ọgwụ dị arọ. Na mgbakwunye na ịbawanye agụụ, ọ nyekwara aka n'inweta ume nakwa dịka ọbara ọbara ọbara.
Raw Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ isi agwa
aha: Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C21H32O3
Ọbara arọ: 332.48
Raw Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ eji mee ihe na steroid
Oxymetholone ntụ ntụ na-akpọkwa Anadrol ntụ ntụ, A-bombu na A50.
Raw Oxymetholone ntụ ntụ Usage
Itinye Anadrol ntụ ntụ na 50 mg / ụbọchị nke Dianabol na-enye ntakịrị uru ọ bara na steroid steroid; n'ụzọ dị iche, itinye Anadrol ntụ ntụ na 50-100 mg / day trenbolone acetate ma ọ bụ 60-80 mg / ụbọchị Anavar (oxandrolone) na-enye mmụba dị ịrịba ama.
Ihe eji eme ihe bu 50-150 mg / day. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-eji doses dị ukwuu dịka 300 mg / ụbọchị, mana mgbe ejiri otu ma ọ bụ karịa ndị ọzọ na-agwọ ọrịa anabolic, enwekarị ọganihu dị ukwuu karịa 150 mg / ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị na ụrọ Oxymetholone ntụ ntụ
Mmetụta nke Anadrol ntụ ntụ ga-apụkwa nwayọọ nwayọọ mgbe o jiri ya. Gịnị kpatara ịṅụ ọgwụ a ma ọ bụrụ na mmetụta ahụ ga-apụ nwayọọ nwayọọ? Ọfọn, Anadrol uzuzu dị egwu dị ka ihe na-adịru nwa oge iji meziwanye ike gị dị ka ị na-echere ogige ndị ọzọ ka ịbanye. Ọ na-azụ gị oge na-enye gị ohere ịmalite ọrụ gị na 100%, kama iji izu ma ọ bụ ọnwa jiri nwayọọ nwayọọ banye n'ime ya.
Mmetụta nke Anadrol ntụ ntụ nwere ike ịdị iche site na mmadụ gaa na mmadụ, ma na-agbaso ụzọ na-esonụ. Ị ga-ahụ oke uru dị n'ime izu 3 mbụ n'iji mgbakwụnye. Mmetụta ndị ga-emecha gbasaa mgbe nke ahụ gasịrị. Iji belata ike maka mmetụta ndị ọzọ, tụlee nlezianya nyochaa usoro ọgwụgwọ gị.
Raa Anadrol ntụ ntụ
Raw Oxymetholone ntụ ọka Marketing
Esi zụta Oxymetholone ntụ ntụ; zụta Anadrol ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye 98% Oxandrolone ọcha / Anavar raw ntụ ntụ si bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji oral.
Raa Anadrol ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
4 reviews maka Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ
Oxymetholone (Anadrol) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
Ị nwere ike iziga viagra ka ọ bụrụ na i?
Naanị m na-eme nchọgharị na weebụ., Ma hụ isiokwu a dị oke mma. I mere n'ezie ọrụ dị ukwuu, isiokwu ndị dị na weebụ a dị ebube, m ga-abịa ebe a ọtụtụ mgbe iji mụtakwuo ihe
Akụkọ magburu onwe ya banyere anadrol! Ị nwere ndụmọdụ ọ bụla maka ndị edemede edemede?
Enwere m olileanya ịmalite blọọgụ m n'oge na-adịghị anya ma enwere m ihe furu efu na ihe niile.
Ị nwere ike ikwu ka ịmalite na ikpo okwu dị ka WordPress ma ọ bụ gaa maka ụgwọ
nhọrọ? E nwere ọtụtụ nhọrọ n'ebe ahụ na m zuru oke
enweghi mgbagwoju anya, enwere m ike ịma otu i si mee nke ahụ. Daalụ nke ukwuu!